विजय गच्छदारको डवल ह्याट्रीक, ३२१ मतले जीते भगवतीलाई
२०७४ मङ्सिर २७ बुधबार, सुनसरी । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार विजयी भएका छन् । ... बाँकी अंश»
सुनसरी ३ मा गच्छदार अगाडि, एक घण्टाभित्रै परिणाम, दोहोरो ह्याट्रिक नजिक
२०७४ मङ्सिर २७ बुधबार, सुनसरी । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ को मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार जित नजिक पुगेका छन् । ... बाँकी अंश»
समानुपातिकमा एमालेलाई भेट्टाउने प्रयास गर्दै काँग्रेस, कसको कति मत (१०ः१० बजेसम्म)
२०७४ मङ्सिर २७ बुधबार, काठमाडौं । प्रतिनधिसिभाको समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले निकै अगाडि बढेको छ । एमालेको १८ लाख ९३ हजार २९० मत हुँदा काँग्रेसको १८ लाख ३ हजार ५४२ मत रहेको छ । ... बाँकी अंश»
तनहुँ कांग्रेस सचिव बास्तोलाद्वारा दिए पदबाट राजीनामा
२०७४ मङ्सिर २७ बुधबार, तनहुँ । नेपाली कांग्रेस तनहुँका सचिव विश्व वास्तोलालाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
सुनसरी—३ मा गच्छदारले गरे कमाल, भगवतीलार्इ छाडेर लागे अघि
२०७४ मङ्सिर २७ बुधबार, इनरुवा। सुनसरी क्षेत्र नं ३ को मतगणनामा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार ... बाँकी अंश»
२०७४ मङ्सिर २७ बुधबार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ... बाँकी अंश»
२०७४ मङ्सिर २७ बुधबार, काठमाडौँ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचित प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा ... बाँकी अंश»
पार्टी निष्कासनको कार्वाहीप्रति लुँइटेलले जनाए आश्चर्य
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, ओखलढुङगा। नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य कुमार लुइटेलले पार्टी निष्कासनको कार्वाही भन्दै आफ्नो नाम पारेकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
सुनसरी ३ मा ४४ मा झर्यो मतान्तर, कहाँ कहाँ बाँकी छ मत गन्न ?
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, सुनसरी । बिजय कुमार गच्छदारले प्रतिद्धन्द्धी भगवती चौधरीसँगको मतान्तर ४४ मा झारेका छन् । पछिल्लो सार्वजनिक नतिजा अनुसार एमालेकी चौधरीले ३२ हजार ५ सय ७० मत ल्याउँदा गच्छदारले ३२ हजार ५ सय २६ मत ल्याएका छन् । ... बाँकी अंश»
समानुपातिक तर्फ गोरखामा पनि काँग्रेस पहिलो
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, गोरखा । प्रत्यक्षतर्फ एउटा प्रदेशसभा जितेको गोरखाको नेपाली काँग्रेस समानुपातिकतर्फको मतगणनामा भने पहिलो पार्टी बनेको छ । ... बाँकी अंश»
यी हुन् काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा आएका 'नयाँ अनुहार'हरु
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, काठमाडौं । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ । निर्वाचनको प्रत्यक्ष तर्फको पनि अन्तिम नतिजा ... बाँकी अंश»
'हारमा निराश बन्ने व्यक्ति कांग्रेस हुन सक्दैन' : विश्वप्रकाश शर्मा (भिडियो)
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, काठमाडौं । असन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा नराम्रोसँग हार व्यहोरेको कांग्रेसका कार्यकर्तालाई उक्साउदै नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले हारमा निराश बन्ने व्यक्ति कांग्रेस हुन नसक्ने बताएका छन् । मंगलबार मतदातालाई अभार प्रकट गर्न झापाको धुलाबारीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
समानुपातिकमा काँग्रेस पनि १० लाख क्लवमा, अरु कसको कति ?
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ नेपाली काँग्रेसले पनि १० लाख मत कटाएको छ । नेकपा एमालेले १० लाख ८१ हजार मत कटाएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसको लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सुखद रहेन। दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउँमा आउँदा त्यसले परिणाममा पार्ने प्रभावको आँकलन गरिएपनि यस तहसम्म होला भन्ने अनुमान काँग्रेसीहरुलाई थिएन। ... बाँकी अंश»
समानुपातिकमा एमालेले कटायो १० लाख मत, अरु कसको कति ? (बिहान ९ः१५ बजेसम्म)
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ नेपाली काँग्रेस केही सुस्ताउँदा नेकपा एमालेले १० लाख मत कटाएको छ । ... बाँकी अंश»
ओखलढुंगामा पार्टीलाई अन्तर्घात गर्ने २० जना काँग्रेसबाट निष्काशित
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, ओखलढुंगा । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गर्ने र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तथा सघाउने २० जनालाई कार्वाही भएको छ । ... बाँकी अंश»
समानुपातिकमा एमाले बढी नै अगाडि लाग्यो, काँग्रेस सुस्ताउँदै, कसको कति मत ? [बिहान ६ः३० सम्म]
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ नेपाली काँग्रेस केही सुस्ताउँदा नेकपा एमाले निकै अगाडि बढेको छ । ... बाँकी अंश»
विजयोत्सवमा पनि हाँस्न सकिनन् बिना मगर
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भारी मतान्तरले विजयी हुँदै बिना मगरले प्रत्यक्ष ... बाँकी अंश»
काँग्रेस नील भएका ४१ जिल्ला (सूचीसहित)
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, काठमाडौं । दोस्रो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काँग्रेस संविधान जारी भएपछि नयाँ संरचनाअनुसार भएको तीन तहका निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएको छ । ... बाँकी अंश»
गच्छदारको क्षेत्रमा भगवतीले मत गन्न दिइनन्
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, काठमाडौं । बिहानदेखि रोकिएको सुनसरी क्षेत्र नं ३ को मत गणना अझै सुरु हुन सकेको छैन् । हार्ने निश्चित भएपछि ... बाँकी अंश»